वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य जाँच सरकारी अस्पतालमा गराउने तयारीमा छौं : डा दीपेन्द्ररमण सिंह [अन्तर्वार्ता]
असार १४, २०७५ बिहिवार ०७:००:०० प्रकाशित
डा दीपेन्द्ररमण सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख हुन्। उनीसँग वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्यका विषयमा गरिएको कुराकानी :
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्न सरकारी अस्पताल सक्षम छैनन् ?
अहिलको अवस्थामा सबै छैनन्। तर, हामी सरकारी अस्पताललाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य जाँच गराउन सक्ने बनाउन खोजिरहेका छौं। उपत्यका बाहिरै पनि कहाँ, कसरी गराउन सकिन्छ? भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं।
जसले गरिरहेका छन्, तिनीहरुको अनुगमन कमजोर भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
अहिले चलिरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको जनस्वास्थ्य कार्यालयले अनुगमन त गरेका होलान्। तर, अनुगमन निश्चित समयमा हुन्छ। हामीलाई सुन्नमा के आएको छ भने, अनुगमन चलिरहँदा उपकरण र मेसिन ल्याउने तर अरु बेला अन्यत्रै पु¥याउने गरिन्छ। त्यसैले हामी ‘रियल टाइम मनिटरिङ’मा लैजाने प्रयासमा छौं। कुन दिन बिरामी कति आए ? कतिको स्वास्थ्य ठिक पाइयो ? कति बिरामी देखिए ? भनेर हेर्छाैं। कुनैमा रोग देखियो भने त्यो हाम्रो सरोकारको विषय पनि हो। उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो भने उपचारका लागि कहाँ गए ? वा गएनन् भन्नेबारे हामीले ध्यान दिन खोजिरहेका छौं।
स्वेदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण पास भएर जाने तर विदेशमा फेल हुने किन हुन्छ ?
यताबाट तन्दुरुस्त भनिएकाहरु उता गएर फेल भएर फर्किएका हुन्छन्। उनीहरुको पैसा खर्च त हुन्छ नै, सपना पनि चकानाचुर हुन्छ। त्यसैले यो अवस्था दोहोरिन नदिन समय सापेक्ष मापदण्ड बनाउन खोजिरहेका छौं।
स्वास्थ्य शिक्षा दिन पनि जरुरी छ, होइन र ?
स्वास्थ्य शिक्षाको अभाव छ। सुसूचित गर्न जरुरी छ। खानपान, व्यक्तिगत सतर्कताका विषयमा जानकारी दिनुपर्छ। यसैगरी, बिरामी पर्दा कसलाई भन्ने ? कुन ठाउँमा जाने ? भन्ने विषयमा पनि प्रस्ट बताउन आवश्यक छ। यसका लागि श्रम मन्त्रालयलाई पनि विकल्प सुझाउन खोजिरहेका छौं। टेलिमेडिसिन राख्न सकिन्छ कि ? त्यहीँको दूतावासले केही व्यवस्था गर्न सक्छ कि ?
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्यलाई किन ध्यान नदिएको ?
झन्डै एक जिल्ला बराबरका मान्छे मलेसियामा छन्। धेरै श्रमिक भएका ठाउँमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। भाषा नमिल्ने भएकाले सही उपचार नभइरहेको हुन सक्छ। यसैगरी, उनीहरुलाई ‘साइकोसोसियल काउन्सिलिङ’को पनि जरुरी छ। उनीहरुका कुरा सुनिदिन र स्वास्थ्यमा ध्यान दिन हामीले केही व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।